China Rubber mkpuchi ntutu ahịhịa na-acha akwụkwọ nchara na imewe aka ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Yongsheng
Rubber mkpuchi ntutu ahịhịa nwere agba akwụkwọ na njikwa aka
Agba: Black, Purple, Pink, Blue, Yellow, Gold.… Nhazi.
NKE165, T42-2554C, NZ52-144T
K119-2586T, T119-2554T, NY
T122-2586T, T122-1765T, NY 122-2208TC, T122-2151T
NDIKA, T143-2152T, ND
NDIKA, T145-2151T, T145-2213C, T145-2127T
NKE165, T164-1765T, T164-1965T, T145-12227T
NDIKA, T149-2554T, N900-2154
K156-2586, T156-1765T, T156-2143T, T156-2111T
K165-2151T, T165-1765T, T165-2561TSP, T165-2213TC
K166-2586 A, T166-1765T, T166-2561T, T166-2562T
Paddle ntutu ahịhịa, ahịhịa ntutu ntutu dị nro dị iche iche, ahịhịa ntutu isi, na-ehicha ntutu isi. Aluminium gbọmgbọm ntutu ahịhịa niile nwere ike dị. Ntutu ntutu na bristles na-atụ bọl, brushes brushes dị nro na ntutu ma ọ gaghị adọta ntutu. Ọ pụtara na ị na-ezisa isi ala mgbe ị na-ehicha ala nke na-eme ka mgbasa dịkwuo elu, si otú a na-enyere aka ịkwalite uto ntutu. Ntutu ntutu isi maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, Ọ dị mma na Wet ma ọ bụ Ncha ntutu, Ogologo Ogologo Ntutu Ntutu Niile na ụdị ntutu niile.
Aka nke dị iche iche efere imewe. Ejiri ederede na-enweghị mmịcha ederede, nkasi obi dị mfe ma ghara ịdị mfe ịda. Jikwaa ala na oghere, adaba maka nkwụsịtụ. The otutu, ergonomic-abụghị ileghara njikwa e akpan iji nye gị kacha akara na nkasi obi ebe styling. Ọ dị mfe ịnweta nsonaazụ salonlọ Mmanya ọkachamara n'ụlọ nwere brushes ntutu a. Nwere ike ịhọrọ onye ọ bụla masịrị gị maka njikwa ahụ. Offọdụ n'ime ha nwere ike iji aka dị nro, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnwe ọfụma mara mma, ị nwekwara ike ibipụta akara ngosi gị na ọnọdụ efere. Na efere nwere ike dị iche iche na agba na mmetụta dị ka ahụ, n'ihi na ihe atụ, i nwere ike tee agba na efere na roba mkpuchi na ahịhịa. Na pinballs nwere ike ịbụ otu agba na efere dị ka otu usoro.
Nke gara aga: UV eletrik, transfter mmiri, na-egbuke egbuke na-ebipụta ntutu isi ya na ejiri aka ya
Osote: PriceList maka China ngwaahia Professional Classic Black Makeup Brushes Setịpụ Ihu Anya ime ihicha nchacha
Ceramic Hair ahịhịa
Ntutu ahịhịa Rubber Bristle
Naịlọn Pins Ntutu ahịhịa